Gboard သုံးနည်း ရေးမယ် ရေးမယ် လုပ်နေတာကြာပြီ။ ခုတော့ တနိုင်ငံလုံး ယူနီကုဒ် ပြောင်းကြတော့မယ် ဆိုတော့ recommend ပေးချင်တာတော့ Gboard ပဲ။ ပုဂံနဲ့ TT Keyboard ကလည်း ကောင်းတာပါပဲ။ Manic keyboard ဆိုလည်း အတော် အဆင်ပြေတယ်။ ဒါပေမယ့် ယူနီကုဒ် တခုတည်းပဲ သုံးမယ် ဆိုရင်တော့ Gboard က အဆင်ပြေဆုံးပေါ့။ စိတ်မကောင်းတာက Gboard က Android ရော iOS ရော သုံးလို့ရပေမယ့် မြန်မာကီးဘုတ်ကတော့ Android မှာပဲ ရသေးတယ်(ဒီစာ ရေးနေတဲ့အချိန်ထိပေါ့။ နောက်တော့ ထပ်ထည့်ပေးမယ်လို့ မျှော်လင့်ရတာပဲ)။
Gboard မှာ English keyboard ကို Swype နဲ့ ရိုက်ရတာ အတော် အဆင်ပြေတယ်။ ကျွန်တော်က စာရိုက်ရင် လက်တဖက်တည်းနဲ့ ရိုက်နေကျဆိုတော့ ကျွန်တော့် အတွက်တော့ တကယ်ကို အသုံးဝင်တယ်။ Gboard setting ထဲက glide typing မှာ on လိုက်ယုံပဲ။ ဘယ်လို သုံးရမလဲ ဆိုတော့ hello လို့ ရိုက်ချင်တယ် ဆိုရင် လက်ကို h-e-l-o ရှိတဲ့နေရာတွေကို ပွတ်ဆွဲ လိုက်ယုံပဲ။
အဲ့ထဲက gesture delete က delete ကနေ ဘယ်ဘက်ကို ပွတ်ဆွဲ လိုက်တာနဲ့ စာ တစ်ကြောင်းလုံးကို ဖျက်ပေးတယ်။ ရုတ်တရက် မှားဖျက်မိရင်လည်း ဖျက်လိုက်တဲ့ စာကြောင်းကို suggestions box မှာ ပြပေးထားတော့ မှားဖျက်ရင်တောင် ချက်ချင်း ပြန်ယူလို့ရတယ်။
Gesture cursor control က ကျတော့ cursor ကို space bar လေးကို ဖိပြီး နေရာ ရွေ့လို့ရတဲ့ function ပေါ့။
မြန်မာကီးဘုတ်နဲ့ မြန်မာစာ ရိုက်နေရင် space bar ကို နှစ်ချက် နှိပ်ရင်လည်း ပုဒ်မ ချ ပေးတယ်။
အပေါ်က suggestion bar နေရာမှာ tools တွေ ထည့်ပေးထားသေးတယ်။ ကျွန်တော် အကြိုက်ဆုံးကတော့ clipboard manager နဲ့ translate ပဲ။ Translate က Google translate ကို ဖွင့်နေစရာမလိုပဲ ရိုက်နေတဲ့စာ ကို ချက်ချင်း translate လုပ်ပေးတယ်။
clipboard မှာတော့ တစ်နာရီအတွင်း copy လုပ်ထားသမျှ စာတွေကို သိမ်းထားပေးတယ်။စာတွေ ကော်ပီ ကူးတာ များတဲ့လူတွေအတွက် အတော် အသုံးဝင်တာပေါ့။
အခုနှစ်ထဲမှာတင် မြန်မာအတွက် တိုင်းရင်းသား လက်ကွက်တွေပါ ထပ်ထည့် ပေးလိုက်သေးတယ်။ မွန် နဲ့ ကိုပါ ရိုက်လို့ရနေပါပြီ။
မြန်မာ အတွက်က voice typing နဲ့ handwriting ပါ ရနေပါပြီ။ ဖုန်းနဲ့ စာရိုက် ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်တဲ့ သူတွေအတွက် အတော် အဆင်ပြေသွားတာပေါ့။ handwriting က ရာနှုန်းပြည့်နီးပါး မှန်ပေမယ့် voice typing ကတော့ အကုန် မမှန်သေးဘူး။ နောက်ဆိုရင် data များလာတဲ့အခါ မှန်သွားမှာပါ။
Edward October 29, 2020 at 12:14 AM
Irony July 27, 2021 at 9:24 AM
Edward September 7, 2021 at 12:40 AM
You've to download the Gboard app ​from here to use this keyboard app..
Ana Watson September 8, 2021 at 11:15 PM
Excellent blog, I loved it so much that I came back here to give feedback. Thanks though. Also checkout Null's Brawl Apk.
Ana Watson October 24, 2021 at 8:36 PM
Thomya_Patlacha. November 10, 2021 at 11:35 PM
oscar clark February 5, 2022 at 2:41 AM
Highly appreciate your efforts and keep posting such informative stufffm whatsapp download.Very good points you wrote here..Great stuff.
KevinRhodes234 April 8, 2022 at 4:10 AM
Your Blog is very nice. Wish to see much more like this. Thanks for sharing your information. Also makeapost on GBWhatsapp APK.